Laba iyo toban South waxay leedahay qiimo dhimis ilaa 50% ah qalabka Mac | waxaan ka imid mac
Hubaal, qaar badan oo idinka mid ah waad ka yara daallan tahay Black Friday iyo waxyaabaha ka soo jeeda, laakiin waxaan haynaa dalabyo u haray inaan idinla wadaagno dhammaantiin. Isbuucaan Marka lagu daro qulqulka Black Friday waxaan leenahay waxa loogu yeero "Cyber ​​​​Monday" si ay u dhammeeyaan iibsashadaas oo aynaan dhammayn oo aan ku helno qiimo ka wanaagsan wixii aan sugaynay maalmo
Shaki la'aan, waxay bixiyaan Isniinta Madow xitaa way ka fiicnaan karaan kuwa Jimcaha Madow, laakiin waa inaan ka digtoonaano. Haddii aad ka mid tahay kuwa jecels Laba iyo toban kiis oo koonfurta ah ee Mac Waxaa suurtogal ah in aad ka heli doonto qiimo dhimisyo ay horay ugu diyaariyeen dukaankooda internetka, ha seegin.
Tusaale ahaan waxaan eegeynaa Buug-gacmeedka buug-yaraha ee MacBook ama waxay u taagan tahay sida BookArc kuwaas oo leh qiimo dhimis yar laakiin dhab ah. Run ahaantii waxaan ula jeednaa in ay run tahay in dalabku jiro, ma jiraan wax dabin ah in kasta oo qiimo dhimisyadu ay yihiin qaar "caddaalad" waxa qaar badan oo naga mid ah ay filayaan, laakiin waa dhab. Muddo aan fogayn ayaanu dib u eegis ku samaynay sleeve for MacBook Bookbook runtiina waa kuwo aad u xiiso badan. Waxaan ka tagnay liis yar oo qalabka Mac ah oo iib ah:
Qeexida "Cyber ​​​​Isniin" in qandaraasyada wikipedia ay tiraahdo:
Waxaa loo yaqaan "cyber Monday" (laga bilaabo isniinta internetka ee Ingiriisiga) ilaa wakhtiga suuqgeynta u dhigma ee Isniinta soo socota Thanksgiving ee Maraykanka (Khamiis afraad ee bisha Noofambar), oo dhacaya ka dib "Jimcaha Madoow" (Jimcaha madow, maalinta xigta Thanksgiving), ay sameeyeen shirkado si ay dadka uga dhaadhiciyaan in ay online wax ka iibsadaan.
Markaa waa inaan ilaalinaa soo jeedinno laga yaabo inay maanta oo dhan ka muuqdaan intarneedka. Laakin sidii aan uga dignay Jimcihii hore ee "Black Friday" ka taxdar yaan lagu khiyaanayn qiimo dhimis aan run ahaantii ahayn. Si kastaba ha ahaatee waxaan ku raaxaysan karnaa qaar ka mid ah qiimo dhimis xiiso leh iyo kiiska laba iyo toban South, waxaa lagu talinayaa in dib loo eego dalabyada ay ku leeyihiin alaabtooda Mac.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » Gargaarka » Laba iyo toban South waxay leedahay qiimo dhimis ilaa 50% ah oo ku saabsan qalabka 'Mac'
Gawaarida kumbuyuutarka oo kuu fududeyn doona inaad ku isticmaasho Mac